Lipstick Matte Lipstick Macdanta Midabkiisu Fiican yahay 100% Samaynta Dabiiciga ah Aan Sumeysanayn, Xadgudub iyo Paraben Farriin Bilaash ah oo Waara.
Qurux badan oo waara, nuurad jilicsan oo jilicsan ayaa jilicsan, kareemo leh, u adkeysanaya xirnaanshaha, aan qalajinayn oo midabkeedu sarreeyo.
Midka koowaad:Jaan goyntayada 'lipstick set' ayaa leh midabada ugu caansan ee ugu caansan. Maado jilicsan, muddo dheer soconaya oo biyuhu xireen, fududahay in laga saaro saliidda nadiifinta dibnaha. jilicsanaan jilicsan oo leh midab dhalaalaya si bushimahaagu u noqdaan kuwo jilicsan oo jilicsan.
Labada hore:Lagu sameeyay waxyaabo dabiici ah, dhammaan noocyada maqaarka, oo ay ku jiraan maqaarka xasaasiga ah. Iyada oo leh nuurad aad u tayo sare leh oo tayo sare leh, ayaa ah midab aad u midab badan oo muddo dheer soconaya.
Lipstick jilicsan oo jilicsan, lipstick-kan naxdinta leh ee jilicsan wuxuu leeyahay midab jilicsan iyo midab midab leh, iyo saameynta jilicsan ee jilicsan isla markiiba way rogi kartaa oo ku hayn kartaa meesha.
Kalsooni iyo riyo, lipstick-kan jilicsan waligiis ma qallalan, marwalba waa kareem, riyo iyo matte! Hadda waxaa jira taxane ah midabyo cusub oo matte ah oo laga kala xusho. Kuwani midabbada casaanka ah ee jilicsan ayaa si sax ah u ah waxa bushimahaagu u baahan yihiin.
Saddexda hore:Waa xariir jilicsan, quruxsan oo qurux badan, bushimahaaga si fudud u samee, oo ku habboon xilliyada oo dhan qurxinta, gaar ahaan xafiiska, shukaansiga, dukaamaysiga, xaflada asxaabta iyo iid kale.
Waxaan fahansanahay inaad mashquulsantahay, waana sababta aan ugu abuurnay bishbaaskan sida fudud loo qaadan karo. Waxay ku timaaddaa qaab iswaafajsan oo aad si fudud ugu ridi karto boorsadaada ama boorsadaada la isku qurxiyo.
Afarta hore:Dibno midab leh, kana midab badan midabbadayada raaxada iyo saamaynta qoyaanka. Faruunta JOYO waxay hodan ku tahay maaddooyinka nafaqada leh waxayna jilcin kartaa bushimahaaga.
Midab Sifeyn Qurux Badan, isticmaal lipstick-ka JOYO si bushimaha ay u noqdaan kuwa jilicsan, jilicsan oo qoyan. Ka dooro noocyo kala duwan oo indhaha soo jiidan kara oo ah midab kareem oo muddo dheer soconaya iyo qoyaan xoog leh.
JOYO Lipstick, haddii aad rabto lipstick cas oo geesinimo leh ama midab qaawan oo qumman, waxaad dooran kartaa midab munaasabado kala duwan. Xulo Matt lipstick, samee midab midab sare leh, ama dooro lipstick midab kareem si aad u abuurto bushimaha jilicsan, jilicsan iyo qoyan.
Codsiga lipstick, dhalashooyinka, aroosyada, xafladaha, qurxinta Halloween, xafladaha is biirsaday, xilliga iskuulka, hadiyadaha Maalinta Jacaylka, Hadiyadaha Kirismaska, iwm.
Hore: Waji qurxiyo-BD-CH
Lipstick Dabiici ah
JOYO © Dhammaan xuquuq dhowran Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Burushka ugu Fiican, Matte Eyeshadow Palette, Qurxinta Indhaha Dahabka ah, Liimiga Shimmer, Lipstick yar, Eyeshadow kareemka ugu fiican, Dhammaan Alaabooyinka